FITONDRANA HVM : Fitondrana miavonavona, manao sorona ny fiainam-bahoaka
“Avonavona, fampahoriana, fampijaliana”. Ireo no santionany iaretan’ny vahoaka Malagasy tamin’ity fitondrana Hvm ity. 10 novembre 2017
Izany hoe nanomboka tamin’ny fidiran’ny Filoha Hery Rajaonarimampianina sy ny ekipany teo amin’ny fitondrana. Avonavona satria dia ny filoha tenany mihitsy no naneho izany ho hitan’izao tontolo izao tamin’ny fotoana nanoloran’ Andriamatoa Andry Rajoelina azy ny “lakile” teny amin’ny lapam-panjakana teny Iavoloha. Endrika mivindavinda sy feno avonavona no nasetriny ny fitiavan’ity tanora tompon’andraikitra azy tamin’izany. Nitsipa-doha lakan’itana, hoy ny maro nefa dia ny vahoaka mpanara-dia ny filohan’ny tetezamita no nahalany azy ka nahazoany ny fitondrana.
Tsy mahalala afa-tsy ny hampahory ny vahoaka. Manjaka ny karazana tsy fandriam- pahalemana manerana ny Nosy, ary amoizana aina izany matetika. Miakatra ny vidim-piainana. Fanesona no asetrin’nyfiloha izany rehefa mandray fitenenana izy. Ambarany matetika fa mandroso i Madagasikara. Tamin’ny herinandro teo aza moa dia nisy minisitra sahy nilaza fa tsy mahita afatsy ny vidim-bary vokarina eto an-toerana ny vahoaka Malagasy. Mba misy, hoy izy ny vary afarana avy any ivelany 1400 Ariary ny kilao, fa ny lafo ihany no jeren’ny vahoaka dia lazaina fa lafo ny fiainana. Mba mila mihinana ny vary tsara avy eto an-toerana ny vahoaka satria io no ara-pahasalamana. Ary odian’ity fanjakana tsy mahita vahaolana amin’ny fahoriam-bahoaka ity fa betsaka ny Malagasy tsy mahazaka ny fihinanana ireny vary hafarana avy any ivelany ireny. Rehefa marary anefa ny vahoaka ka tsy ampy vola dia miandry fahafatesana any an-trano.
Tena mijaly ny vahoaka, raha tsy hilaza afatsy izao lazaina fa vanim-potoanan’ny pesta izao isika. Ao anatin’ny kolontsaina Malagasy ny lanjan’ny taolam-balo nefa dia betsaka ny tsy mahita izay toerana andevenana ny havany rehefa lazaina fa matin’ny pesta, toy izay nahazo ny fianakavian’i Tiana mpianatra tao amin’ny sekoly Jean XXIII Anatihazo Isotry, fa dia fahatokisana fotsiny no nabahana tao an-tsaina ka nandeha niezaka nanatsara ilay toerana nolazaina fa nametrahana ny nofo mangatsiakan’ity menaky ny aina.